विश्वका घुम्नलायक उत्कृष्ट दश शहरमा काठमाडौँ पनि !
काठमाडौँ - नेपाल र नेपालीका लागि एउटा खुसीको खबर छ । विश्व प्रसिद्ध लोन्ली प्लानेटले विश्वका घुम्नलायक विश्वका उत्कृष्ट दश शहर मध्ये काठमाडौँको नाम समेत समेटेको छ । यसले नेपालमा पर्यटक भित्र्याउन सरकार र निजी क्षेत्रले गरिसकेको सार्थक प्रयत्नलाई समेत बल दिएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन, प्रचार प्रसारमा काम गर्दै आएको लोन्ली प्लानेटले सन् २०१९ का घुम्नलायक उत्कृष्ट दश शहरको सूचीमा काठमाडौँलाई समावेश गरेर नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याएको छ । सन् २०२० लाई नेपाल सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको र सो अवधिमा २० लाख पर्यटक ...
चीनले थाल्यो सिगात्से-केरुङ रेलमार्ग निर्माण, केरुङ-काठमाडौँ कहिले ?
काठमाडौं - छिमेकी चीनले सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग निर्माण शनिबार सुरु गरेको छ। रेलमार्गको दुरी ५४० किलोमिटर छ। जटिल भौगोलिक क्षेत्र रहेकाले रेलमार्ग निर्माण कम्तीमा सात वर्षमा पूरा हुने अनुमान छ। ‘चीनले अब केरुङलाई रेलमार्गसँग जोड्ने निश्चित छ,’ बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले भने, ‘केरुङ रेलमार्ग तिब्बत सरकारको प्राथमिकता हो। तर भौगोलिक जटिलताका कारण ढिलाइ भएको थियो। अब काम अघि बढेको छ।’ नेपालमा निकै समयदेखि केरुङमा रेल आउने विषयमा चर्चा हुँदै आएको छ। केरुङमा रेल आएपछि काठमाडौं ल्याउन सहज हुने विश्वास छ। काठमाडौं–रसुवागढी (केरुङ सीमा) रेलमार्ग ७२ किलोमिटर हुने ...
विश्वकप महाकुम्भमा 'यौन ब्यापार', विश्वभरबाट यौनकर्मी रसिया पुगे
फुटबलको महाकुम्भ विश्वकप २०१८ बिहीबारदेखि सुरू हुँदैछ । विश्वकपको चर्चा भइरहँदा चर्चामा आउने अर्को कुरा हो यौन व्यापार । विश्वकप भइरहँदा पर्यटनसँगै यौन बजारपनि फस्टाएको हुन्छ । बन्देज आफ्नै ठाउँमा छ तर विश्वकपको अर्को महत्पूर्ण आकर्षण यौन पनि हो भन्दा फरक नपर्ला । विश्वकप हुने देशमा विश्वभरबाट यौनकर्मी पुग्ने गरेका छन् । यसको निरन्तरता रसियामा पनि देखिएको छ । किनकी रसियामा यौन कानूनतः खुल्ला जस्तै छ । विभिन्न प्रतिवेदनले रसिया विश्वकप २०१८ का लागि नाईजेरियाबाट मात्रै १ सय ७० मिलियन यौनकर्मी पुग्ने बताएको छ । रसियामा ५० ...
बन्दीपुरमा केबलकार निर्माण सुरु हुने
दमौली - प्राकृतिक दृश्यावलोकन र सुन्दरताका कारण चिनिएको पुरानो सांस्कृतिक गाउँ बन्दीपुरमा केबलकार सेवासमेत सुरु हुने भएको छ। झन्डै आठ वर्षअघि लाइसेन्स लिएको बन्दीपुर केबलकार कम्पनीले यही असारबाट काम थाल्दै छ। कम्पनीले ५५ करोड लागतमा १६ सय मिटर दूरीको केबलकार सुरु गर्ने केबलकारको निर्माण होल्डिङ कम्पनी आरकेडी रियल स्टेट कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले बताए। सोही कम्पनीले कास्कीको सराङकोटमा समेत केबलकार निर्माण गर्दै छ। प्राकृतिक हिसाबले बन्दीपुरमा आउने ठूलो संख्याका पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यसाथ केबलकार स्थापना गर्न लागिएको शर्माले बताए। ‘बन्दीपुरमा आउने स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको ...